По состоянию на 19 октября в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Кировской области картофель убран с площади 1143 га...
Ngaphezulu kwamathani ayizinkulungwane ezingama-400 amazambane avunwe esifundeni saseNizhny Novgorod
Ukuvuna sekuzophela esifundeni saseNizhny Novgorod. Naphezu kwabo bonke ubunzima besizini yezolimo, abalimi bakwazi ukuthola imiphumela emihle. “Imiphumela yokugcina isekhona ...
Izinhlangano zezolimo esifundeni saseKostroma ziphothule ukuvuna amazambane
Ukuvunwa kwamazambane esifundeni kulo nyaka kuqedwe ngo-Okthoba 13, 2020. Amazambane avunwe amahektha ayi-1443 (noma ama-100% we ...
Abafuyi baseRussia benze inzalo entsha engu-13 yesithombo sebhitrudi
Ukuqhubeka komsebenzi wensimu wonyaka eRussia. Idatha kusukela ngo-Okthoba 19
Ngokuya ngemininingwane yokusebenza yezindikimba ezilawulayo zezakhiwo zezimboni zezimboni zezindawo zeRussian Federation, kusukela ngo-Okthoba 19, 2020, okusanhlamvu nezitshalo ezinembumba ...
UMbusi weSifunda saseKrasnoyarsk uvakashele indawo yezolimo "uDary Malinovki"
UMbusi u-Alexander Uss uthathe uhambo olusebenzayo waya esifundeni saseSukhobuzimsky, lapho ahlola khona ukuthi isigaba sokugcina sokuvunwa kwamazambane siqhubeka kanjani. Kulokho ...
Kusukela ngomhlaka-6 kuya ku-9 Okthoba, umbukiso okhethekile we-VIII International wemishini nemishini yezolimo - i-AGROSALON ibibanjelwe eCrocus Expo IEC ...
Abase-Agrarians baqoqa amabhithi, izaqathe, iklabishi no-anyanisi. Ukuqhubeka komsebenzi wokuvuna emapulazini esifundeni saseMichurinsky kuhlolwe yinduna ebambile ...
IRosselkhozbank ihlela ukuxhasa imikhiqizo yezolimo yesifunda ngokukhipha amakhadi asebhange. UMnyango Wezolimo waseSverdlovsk waba ngowokuqala ukuphendula kulolu hlelo. “Umbono omuhle lona ...
Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye zalo nyaka, iRussia yathumela ngaphandle amathani ayizinkulungwane ezingama-254,8 amazambane (ukudla nembewu), okucishe kube ngu-36% ngaphezu ...